Ip Address Hide နိုင်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များ | AnZarTone
by AnZarTone Ip Address Hide နိုင်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များ
IP Hide Websites
ကျနော်တို့ Gmail အကောင့်အသစ် ဖွင့်တဲ့ အခါမျိုးမှာ Form အကုန်ဖြည့်ပြီး နောက်တစ်ဆင့်လည်း ရောက်ရော ဖုန်းနံပါတ် တောင်းတဲ့ ပြဿနာမျိုး ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ IP Address ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီထက့် ဖြစ်နိုင်တာတွေလည်း ပါကောင်း ပါနိုင်မှာပါ။
အကယ်၍များ IP Address ကြောင့် Gmail Account အသစ် ဖွင့်မရတာမျိုးဆိုရင် အောက်က IP Address ကို ဖျောက်ပေးတဲ့ ဆိုက်တွေထဲကနေ တစ်ဆင့် Gmail ကို သွားပြီး အကောင့်အသစ်တစ်ခု ဖွင့်ကြည့်ပါလို့ အကြံပြု တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ အရင်တုန်းက အခြေအနေနဲ့ ပြောရရင် အချို့သော ဆိုက်တွေက ပိတ်ထားတဲ့ အတွက် Proxy ကျော်ပြီး ကြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စမျိုးမှာလည်း ဒီအောက်က ဆိုက်တွေကနေတစ်ဆင့် သွားကြည့်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။
ခုအချိန်မှာတော့ဖြင့် Proxy ကျော်ပြီး ကြည့်ရတဲ့ ဆိုက်တွေက မရှိသလောက် ရှားသွားပါပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ IP Address ကို မသိစေချင်တဲ့ အခါမျိုးမှာ အောက်က ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေထဲကနေ ဝင်ပြီးတော့ သုံးကြည့်ပါလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ အောက်က IP Hide ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကတော့ အကောင်းဆုံး IP Address Hide ပေးနိုင်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုနိုင်လေမလားပါပဲ။
ကဲ ….. အောက်က ဆိုက်တွေပါပဲဗျို့ ……။ (ပုံများ မပေါ်ပါကလည်း ပုံကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါက သူ့ဆိုက်ကို ရောက်သွားပါမည်။)
Post by မဟာရာဇာ အံစာတုံး
This entry was posted in Blog and tagged မဟာရာဇာ အံစာတုံး, ip hide. Bookmark the permalink.
← Creative နံရံ ပန်းချီများ	အားလုံးပဲ Happy Christmas ဖြစ်ပါစေ … :) →